Siinta Gaarka ah ee Loolanka Maalinta ugu badan - Cunnooyinka Taayirada
Sii gaar ah caqabadda Maalinta Max
Warar xiiso leh: Cuntada cusub ee Wheels Kitchen ee Fursadaha ayaa ka shaqeyneysa sidii loo ballaarin lahaa tirada dadka ay u adeegto. Hadda marayo Sii ilaa Maalinta ugu Badan, waxaad gacan ka geysan kartaa suurtagalnimada ballaarintaas!
Waxaan ka shaqeyneynaa in ka badan laba jibaar tirada dadka waayeelka ah ee la siiyay cuntooyin nafaqo leh oo ka baxsan Jikada Fursadaha - kordhinta wadarta tirada cuntada ee la bixiyo maalin kasta oo laga dhigo 1,100 marka la gaaro Janaayo 1. Laakiin si taas loo sameeyo, waxaan u baahanahay inaan soo iibsanno Gawaarida cusub ee alaabada la geeyo si cuntada loogu geeyo xaafadaha.
Taasi waa meesha aad ka soo gasho.
Inta udhaxeysa hadda illaa Nofeembar 16, waxaan rajeyneynaa inaan sare u qaadno $50,700 - taas oo ah inta ay le'eg tahay qiimaha gaadhiga cusub ee alaab-qaadista. Iyo koox deeqsi ah oo deeq-bixiyeyaal ah ayaa isku raacay inay iswaafajiyaan dhammaan tabarucaadka laga sameeyay himiladaas.
Taasi waxay ka dhigan tahay dhammaan tabarucaadka la sameeyay inta u dhexeysa hadda iyo dhammaadka Sii u-bixinta Maalinta ugu Weyn Nofeembar 16 ee ujeeddadaas waxay u dhigmaysaa dollar halkii doolar!
Qadar kasta oo aad ku bixin karto hadafkan ayaa naga caawin doonta inaan laba jibaarno tirada dadka aan u adeegno jikadayada cusub ee loogu talagalay u adeegida Cunnada qaatayaasha Wheels ee Magaalooyinka Mataanaha ah.
Halkan guji si aad ugu tabarucdo oo aad u laba-jibbaarto saameynta deeqdaadu ku bixiso u dhiib maalinta ugu badan!
Dhammaan lacagaha dheeriga ah ee la aruuriyay ee ku siiya Maalinta ugu Muhiimsan Maalinta ayaa loo isticmaali doonaa in lagu taageero gaarsiinta cunnada nafaqada leh ee waayeelka iyo dadka naafada ah ee u baahan. Hadday tahay cuntada lafteeda, ama booqashada saaxiibtinimo ee uu ku tabarucay mutadawuca, waxaad taageereysaa adeeg in badan oo deriskeennu isku halleeyaan inay ku noolaadaan si madax-bannaan.
Waa tan waxa Lillian, oo ah cunno qaataha ku leh St. Paul ay ka leedahay wax ku saabsan khibradeeda ku saabsan Cunnada Lugaha:
“Waxaan qaadanaayay Cuntada Lugaha Lugta illaa saddex sano. Taasi waxay u badan tahay wacitaankii ugu fiicnaa ee aan abid sameeyo. Cunnadu way wanaagsan tahay qof walbana waa cajiib. Kaliya waxaan jeclahay inaan arko iyaga 'sababta oo ah mararka qaarkood waa kuwa kaliya ee aan arko inta lagu jiro maalinta. Marwalba waa inaan isku duubay. Ilaahayow, waxaan ku faraxsanahay dad cajiib ah. ”
Nofeembar 2, 2017